တျောလှနျးလို့ ဆုခတြာနျော ကောငျလေး - booksmyanmar
sithu on March 16, 2020
တျောလှနျးလို့ ဆုခတြာနျော ကောငျလေး (စ/ဆုံး)
“ဟာသှားပွီ ၊ မှားမို့တာ”“ရပါတယျ အမ။ မရှကျပါနဲ့ ကြှနျတျော ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောပါဘူး” လို့ မြိုးစညျသူ ပွနျပို့လိုကျတာ။ “ရှကျလိုကျတာ သခေငျြတာပဲ ဗိုလျကွီးရယျ။ ကနျတော့နျော။ သူငယျခငျြးမ တဈယောကျကို လှမျးစတာပါ။” အမကွီး မမလှေမှနျ နဲ့ မြိုးစညျသူ ဟာ ဒီလိုပဲ ခငျသှားခဲ့ကွပါတယျ။ နောကျတော့ သူ့ကို ဗိုလျကွီးလို့ မချေါဘဲ မောငျလေး လို့ ချေါတယျ။ မြိုးစညျသူလညျး သူ့ပုံတှအေောကျမှာ သှားပွီးတော့ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးတယျ။ ရယျလညျးရယျခငျြတယျ။ ဓမ်မစကူးလျမှာ စာသငျပေးနတေဲ့ ပုံလေးတှတေငျထားရငျ သူပို့လာတဲ့ သပွရေောငျ အကှဲကွောငျးနဲ့ ဆကျဆီပုံကို မွငျပွီး ရယျခငျြတာပဲ။
ဖငျလုံးကွီးဟာ ကော့နတောပဲ။ ဖငျကွီးကို ကိုငျပွီး လုပျရတာလညျး တမြိုးကောငျးတာပဲ။ “မောငျလေးရေ ခပျကွမျးကွမျးလေးနဲ့ မွနျမွနျလေးလုပျလိုကျ ပွိုငျတူပွီးရအောငျ မမ ပွီးတော့မယျ” မြိုးစညျသူလညျး စိတျကို လှတျပေးလိုကျတယျ။ တဒိုငျးဒိုငျးနဲ့ ဆကျတိုကျ အခကျြနှဈဆယျလောကျ ဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ သူ့တကိုယျလုံးက အကွောတှေ တုနျယီပွီး ပွီးသှားတယျ။ သုတျရညျတှလေညျး ဘယျလောကျတောငျပနျးထှကျသှားတယျမသိဘူး။ “ဆှဲမထုတျနဲ့ဦး မောငျလေးရယျ။ မ ကို ဖကျထားပေးပါ” တဲ့ ပွောတယျ။ နောကျကနေ ပစ်စညျးကို ထညျ့ထားပွီး ခါးကနေ ဖကျထားပေးတယျ။ မမလှေမှနျက ခေါငျးကို လှညျ့ပွီး မြိုးစညျသူနဲ့ မေးဖြားကို ကွငျကွငျနာနာလေး နမျးလိုကျတယျ။ “တျောလှနျးလို့ ဆုခတြာနျော ကောငျလေး” တဲ့။ပွီးပါပွီ…….
တော်လွန်းလို့ ဆုချတာနော် ကောင်လေး (စ/ဆုံး)
“ဟာသွားပြီ ၊ မှားမို့တာ”“ရပါတယ် အမ။ မရှက်ပါနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး” လို့ မျိုးစည်သူ ပြန်ပို့လိုက်တာ။ “ရှက်လိုက်တာ သေချင်တာပဲ ဗိုလ်ကြီးရယ်။ ကန်တော့နော်။ သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကို လှမ်းစတာပါ။” အမကြီး မမေလှမွန် နဲ့ မျိုးစည်သူ ဟာ ဒီလိုပဲ ခင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကို ဗိုလ်ကြီးလို့ မခေါ်ဘဲ မောင်လေး လို့ ခေါ်တယ်။ မျိုးစည်သူလည်း သူ့ပုံတွေအောက်မှာ သွားပြီးတော့ မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးတယ်။ ရယ်လည်းရယ်ချင်တယ်။ ဓမ္မစကူးလ်မှာ စာသင်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ထားရင် သူပို့လာတဲ့ သပြေရောင် အကွဲကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီပုံကို မြင်ပြီး ရယ်ချင်တာပဲ။
ဖင်လုံးကြီးဟာ ကော့နေတာပဲ။ ဖင်ကြီးကို ကိုင်ပြီး လုပ်ရတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ။ “မောင်လေးရေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ မြန်မြန်လေးလုပ်လိုက် ပြိုင်တူပြီးရအောင် မမ ပြီးတော့မယ်” မျိုးစည်သူလည်း စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ဆက်တိုက် အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့တကိုယ်လုံးက အကြောတွေ တုန်ယီပြီး ပြီးသွားတယ်။ သုတ်ရည်တွေလည်း ဘယ်လောက်တောင်ပန်းထွက်သွားတယ်မသိဘူး။ “ဆွဲမထုတ်နဲ့ဦး မောင်လေးရယ်။ မ ကို ဖက်ထားပေးပါ” တဲ့ ပြောတယ်။ နောက်ကနေ ပစ္စည်းကို ထည့်ထားပြီး ခါးကနေ ဖက်ထားပေးတယ်။ မမေလှမွန်က ခေါင်းကို လှည့်ပြီး မျိုးစည်သူနဲ့ မေးဖျားကို ကြင်ကြင်နာနာလေး နမ်းလိုက်တယ်။ “တော်လွန်းလို့ ဆုချတာနော် ကောင်လေး” တဲ့။ပြီးပါပြီ…….
crd : bmyanmar
ဦးအောငျဇယေမြှ ဒုတိယမွောကျ ဂြော့ချြဘုရငျထံပေးသော ကမ်ဘာ့အမှ ..
အမြိုးသမီး ကြှမျးဘားပညာရှငျ အာဇာနညျ ဘားမယျကွှေ
” ဦးဇျောလငျး “